Fampahalalana be loatra sy infografika | Martech Zone
Alarobia, Aprily 23, 2014 Douglas Karr
Isan'andro isika dia mijery ny fanairana avy amin'ny Meltwater, na mpanohana, ary avereno jerena ireo infografika mifandraika amin'ny marketing am-polony amin'ny Internet. Isan-kerinandro dia misafidy ny tsy hamoaka infografika an-jatony izahay. Mampivelatra ny infografika ny tenantsika ary tsy hoe mpitsikilo isika… fa ny fahafantarantsika fotsiny izay mahatonga ny infografika sy izay tsy mandeha.
Infographic natao tsara tsy misy fampahalalam-baovao manana izao manaraka izao:
Tantara mahafinaritra - amin'ny ankapobeny, tokony hisy lohahevitra vitsivitsy amin'ny fanangonana tahirin-kevitra sy sary. (Jereo Sakano ny vaky trano izay natomboka manodidina ny Halloween)
Fikarohana fanohanana - mba hanamarinana ny tantara, zava-dehibe ny filazan'ny infografika ny fikarohana nataon'ny antoko fahatelo. (Jereo Fandinihana ny isa momba ny firaka)
Famaranana - fampidirana dia tsara foana, fa ny famaranana dia tsy maintsy. Ahoana ny fomba hitarihanao olona nefa tsy ianao no mitondra ny data sy ny famaranana? (Jereo Ahoana ny fampiroboroboana ny lozisialy Proposal Management Business)
famantarana - iza ianao ary maninona ianao no manam-pahefana amin'ity lohahevitra ity? Ho gaga ianao amin'ny isan'ny infografika averiko fa tsara… saingy tsy misy fitaovana ahafantarana ny loharano. (Jereo Ahoana ny fomba fananganana foibe data)
Antso-To-Action - Vao haingana aho no nitsikera orinasa iray noho ny tsy fahampian'ny CTA amin'ny infografika. Nilaza izy ireo fa tsy te hahita azy ireo salesy. Tsy nilaza mihitsy aho ny hivarotra azy ireo… Nolazaiko fotsiny izy ireo fa tokony holazain'izy ireo amin'ny mpitsidika izay hatao manaraka. (Jereo ny Raharaham-barotra amin'ny fitantanana ny fananana nomerika)
Infografika be loatra dia mamoaka statistika mahavariana ho endrika tsara tarehy fotsiny. Ny valiny dia fampahalalam-baovao. Very hevitra sy very hevitra ny olona amin'ny angon-drakitra fa tsy ilay infographic mampianatra ny mpamaky hoe inona ny tanjon'ny infographic.
Misy maningana, mazava ho azy, toa mampihomehy infografika (zahao ny anay Fitiavana sy fanambadiana misafidy ary Maninona ny olona no manentsina anao ao amin'ny Twitter) na tsikelikely infografika (zahao Dingana 10 hitantanana ny fifandraisana amin'ny krizy).
Tags: Sary torohayohatra infographicfampahalalam-baovao